Na dia teo aza ny ‘solon’ny loka’ tamin’ny herintaona dia tsy nomena an’i Maryse Condé avy ao Guadeloupe ny Loka Nobel Literatiora taona 2019 · Global Voices teny Malagasy
Kely foana ny tsy nahazoan'ny Karibeana ny Loka Nobel iray hafa ho an'ny Literatiora
Voadika ny 20 Oktobra 2019 17:03 GMT
Vakio amin'ny teny ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, українська, Français, Español, Nederlands, English
Ilay mpanoratra Goadelopeana, Maryse Condé. Saripikan'i MEDEF tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Commons. (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ny 1 ora tolakandro ora any Soeda ny 10 oktobra 2019 teo no nanambarana miaraka ny loka Nobel ho an'ny Literatiora taona 2018 sy 2019. Nanapa-kevitra ny hanemotra ny lokan'ny taona 2018 ny Akademia Soeda taorian'ny tantara mahamenatra momba ny fitondrantena mamoafady, izay niafara tamin'ny famoronana loka hafa tamin'io taona io. Nomena anarana hoe ny Loka Akademia Vaovao amin'ny Literatiora, natolotra an'ilay mpanoratra tantara foronina Goadelopeana Maryse Condé, izay fanta-daza amin'ny bokintantarany Segu ny loka tamin'izany.
Niaraka tamin'ny tombatombana lehibe tany Karaiba toy ny fifaninanana amin'ny hazakaza-tsoavaly hoe iza amin'ity taona ity no handrombaka ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora dia nahatratra hatramin'ny 5-1 ny tombatombana amin'ny fandresen‘i Condé :
#MaryseConde sa #AntjieKrog?
Iza no hahazo ny Lokan'ny Literatiora 2019?
Vehivavy 14 ihany no nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora, raha ampitahaina tamin'ny lehilahy miisa 113. Tompokovavy Toni Morrison ihany no hany vehivavy mainty hoditra nahazo loka. Andao hataontsika roa izany anio! Edisiona Manerantany ho an'i Maryse Condé.
Saingy matetika amin'ilay tsy ampoizina ny tombatomban'ny loka Nobel ary nomena ilay mpanoratra Aotrishiana Peter Handke ny voninahitra ankehitriny. Ilay mpanoratra Poloney Olga Tokarczuk no nahazo ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora taona 2018 “ho an'ny fitantarana an-tsaina izay […] maneho ny fiampitana ny sisintany ho toy ny endriky ny fiainana”.
Manana Loka Nobel ho an'ny Literatiora miisa roa hatreto ny faritra Karibeana – Ilay poeta avy ao Sainte Lucie Derek Walcott tamin'ny taona 1992, ary ilay teraka tao Trinité sy Tobago, V.S. Naipaul, tamin'ny taona 2001, na telo raha toa ka isaina ilay poeta Saint-John Perse , izay toa an'i Condé, teraka tany Guadeloupe ary sady mizaka ny zom-pirenena Frantsay toa an'i Condé ihany koa noho ny satan'i Guadeloupe ho faritra frantsay any ampitan-dranomasina. Nahazo ny loka Nobel tamin'ny taona 1960 i Perse. Nisy ny fanantenana lehibe tamin'ity taona ity fa hibata indray ho an'ny faritra ny lokan'ny literatiora be mpitsiriritra indrindra eran'izao tontolo izao i Condé.
Mirakitra ireo fiaretana ny olana momba ny firazanana, ny lahy/vavy ary ny kolontsaina mampifandray an'i Afrika sy ny ampielezany midadasika ireo tantaran'i Condé ary nampiarahana tamin'ny tontolon'ny tantara avokoa ireo rehetra ireo toa ny Fitsarana ny mpamosavy tao Salem sy ny fananganana ny Lakandranon'i Panama. Ny politika sy ny feminisma no tsikaritra hatrany amin'ny fitantarany na dia somary nivily nankany amin'ny tantaram-piainany aza ny sangan'asany farany .
Nanapa-kevitra ny ho mpanoratra izy tamin'ny mbola kely taorian'ny famakiany ny Wuthering Heights nosoratan'i Emily Brontë. Nanome voninahitra ilay boky izay nanome aingam-panahy azy i Condé tamin'ny fanoratana ny Windward Heights, bokitantara manan-tantara natao tao Guadeloupe, izay ahitana ny fahasamihafana amin'ny firazanana sy ny kolontsaina ho hery mampisaraka henjana — olana izay noheverin'ireo mpiseran'ny tambajotra sosialy maro fa mitombina tokoa ankehitriny ary tokony hanomezam-boninahitra azy:
Tokony nomem-boninahitra tamin'ny Loka Nobel 2019 i Maryse Conde mba hanehoana amin'izao tontolo izao fa nisy dikany ny lokany fa tsy ilay lehilahy fotsy hoditra Eoropeana mpiaro ny fandripaham-bahoaka. Miarahaba an'i Olga Tokarczuk sy ny tranom-boky Fitzcarraldo noho ny fahendrena namoaka ny fandikan-tenin'ireo boky ireo!
Efa notolorana loka maro hafa i Condé na izany aza. Ankoatra ny maha voalohany indrindra azy nahazo ny Lokan'ny Akademia Vaovao dia efa nahazo ny Grand Prix Litteraire de la Femme (1986), ny Prix de L'Académie Francaise (1988), ary ny Prix Carbet de la Caraibe (1997) ihany koa izy. Notoloran'ny governemanta Frantsay ny Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres ihany koa izy.
Ho an'ireo mpankafy ny sangan'asany sasany, na izany aza dia tsy nampitony ny ratra-pon'i Condé tamin'ny tsy nahavoafidy azy hahazo ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora 2019 ireo fanomezam-boninahitra ireo. Nitaraina tao amin'ny Facebook i Arnel Asonto:
Tena nandiso fanantenana sady ratsy safidy […]
Nanantena an'i Maryse Condé avy ao Guadeloupe hahazo ny lokan'ny literatiora aho saingy toa hita fa mbola mifototra ao ‘Eoropa’ sy tsy mahalala afa-tsy ny ao ny loka …
Nampanantena fanovana vitsivitsy izy ireo na dia teo aza ny tantara ratsin'ny tsy fahombiazana tamin'ny herintaona…
Ianao mihitsy no tokony nahazo izany Maryse Condé.
Manam-pahaizana momba ny literatiora Frankôfôna, Mpampianatra teny Frantsay Misotro Ronono ao amin'ny Oniversiten'i Kolombia ankehitriny i Condé , izay mitazona ny arsivany amin'ny literatiora .